Global Voices teny Malagasy » Mahafatifaty ny tantely Jamaikàna, tena ilaina ny fiarovana azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2021 4:35 GMT 1	 · Mpanoratra Emma Lewis Nandika avylavitra
Sokajy: Karaiba, Jamaika, Mediam-bahoaka, Tanora, Tontolo_iainana, Vaovao Tsara
Tao amin'ny Petchary  ny lahatsoratra no nivoaka voalohany. Dika nokiraina no mivoaka eto ambany.
Ny vehivavy, indrindra indrindra, no tena nomena tosika hahaleotena tamin'ny fanomezana azy ireo fiofanana bebe kokoa momba ny fiompiana tantely, manome azy ireo loharanom-bola hafa mandritra ny fisian'ny valanaretina ary mihoatra lavitra noho izany aza. Vehivavy rahateo ny filoha vaovao mitarika ny fikambanana Westmoreland Bee Farmers Society ao Bluefields Bay any amin'ny morontsiraka atsimo-andrefan'i Jamaika. Noho ireo karazan-tantely tandindonin-doza noho ny ataon'ny olombelona ary satria tena maika ny filàna miaro ireo mpamindra vovobony tena manana ny lanjany ireo, dia mitombo hatrany  ny fahalalàna momba ny tantely, na amin'ny alàlan'ny fandinihana izany na amin'ireo kaonferansa ety anaty tambajotra toy ity iray ity , nampiantranoin'ny Natural History Museum of Jamaica  (NHMJ).
Tena tsara fitontona rahateo ilay fiverenan'ny fahalinana indray, ao anatin'ny toejavatra manodidina ny tantara lavabe  niainan'i Jamaika niaraka tamin'ny fiompiana tantely sy ny loza mitatao maika be mianjady amin'ireo andian-tantely. Vinavina ny hoe misy hatramin'ny kazarana 69 ny tantely  ao Jamaika, ka tantely 500 eo ho eo notsongaina tamin'ny kazarany 40 no hita ao amin'ny tahiry momba ny biby ao amin'ny NHMJ.
Zavatra iray mahazendana, mitombo be ny isan'ireo mpiompy tantely, na any ambanivohitra izany na an-tanàndehibe. Tanora iray mpandraharaha avy ao an-drenivohitra i Adrian Watson, efa an-taona maro no nanaraka fiofanana momba ny fiompiana tantely; ireo tantely tandrefana fantatra loatra amin'ny hoe (Apis Mellifera)  ny azy no ompiany, saingy i Jamaika dia manana betsaka amin'ireo tantely mpitokamonina , izay tena ilaina be amin'ny fitaterana vovobony.Ny Honai Beez Apiary  an'i Watson dia manomana tetikasa iray ho famafazana vovobony ampiasàna ny tantely, ka tohotra iray an-tanandehibe no ho hita anatin'io, ary ikendrena hanofanana mpiompy vaovao sy hanentanana any an-tsekoly, any amin'ny sehetra tsy miankina sy ny maro hafa, momba ny anjara toerana lehibe tànan'ny tantely. Manantena izy ny hanofana ireo tanora tsy mbola manana traikefa momba ny fiompiana tantely ary hanamboatra tranontantely vita avy amin'ny volobe (bamboo) atao manaraka ny fenitra.
Sady feno kazarany maro no mahaliana ny tantely fakàna maminy. Miovaova ny lokony, misy mainty kokoa, ny manja manopy mavo, ny mavo, miankina amin'ny sosona niavian-dry zareo. Ny Tantely Mainty Britanika , ohatra, dia fantatra amin'ny fahasiahany, raha tantely faran'izay malefaka kosa ilay tantely mavo ao Nouvelle-Zélande. Samy manana ny toetra mampiavaka azy ny sosona tsirairay- ny fitomboan-taranaka, ny fanangonana mamimbony, ny fahelàna velona- ary ny mpiompy tantely tsara (a good beekeeper) dia hanandrana ny hampitombo azy ireny ho amin'ny tanjona tsara.
Taltely iray misotro rano, mitsingahila eo ambony zavamaniry iray ao anaty rano mihandrona misy voahirana. Sary an'i Tracy at Senti Bees , natolony sy nahazoana alàlana tamin'i Emma Lewis.
Ny vavin-tantely mpandrafitra dia mazàna no miloko mainty ary tena mpankafy felana hazo moringa .
Ity tantely zanatany miavaka ity, hita teo ampitsihifana felana vao mivelatra maraina tao amin'ny morontsirak'i Parottee, St. Elizabeth, dia angamba ilay karazany Centris .
Mbola dindon'ny Andro Erantany 2021 ho an'ny Tantely ihany , marobe ireo olona ao Jamaika—sy any amin'ireo faritra hafa ao amin'ilay vondronosy ao Karaiba izay, araka ny maha-Firenena Nosy Kely Andalampandrosoana azy, miatrika ny olan'ny fiovàn'ny toetrandro—no manomboka mahatsapa ny maha-zavadehibe ny fisian'ny tantely ho an'ny tontolo iainana sy ny hoavy lovainjafy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/26/152820/
 mitombo hatrany: https://petchary.wordpress.com/2021/05/21/on-jamaican-bees-and-their-keepers/
 iray ity: https://www.youtube.com/watch?v=hIX3YqQ5nYE
 Natural History Museum of Jamaica: https://www.facebook.com/naturalhistorymuseumofjamaica
 tantara lavabe: https://jamaica-history.weebly.com/beekeepers.html
 kazarana 69 ny tantely: https://www.researchgate.net/publication/236684032_The_ecology_of_Jamaican_bees_Hymenoptera
 (Apis Mellifera): https://en.wikipedia.org/wiki/Western_honey_bee
 tantely mpitokamonina: https://www.greenandblue.co.uk/blogs/news/5-things-you-need-to-know-about-solitary-bees
 Ny Honai Beez Apiary: https://honaibeezapiary.wixsite.com/hbapiary
 Tantely Mainty Britanika: https://en.wikipedia.org/wiki/European_dark_bee
 Andro Erantany 2021 ho an'ny Tantely ihany: https://globalvoices.org/2021/05/20/support-your-local-beekeeper-caribbean-concerns-on-world-bee-day/